(၅၁)နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကိုလည်ပင်းညှစ်သတ်၍ ရွှေထည်များဖြုတ်ယူသွားသူ တရားခံကို ညတွင်းချင်းဖမ်းမိ - Yangon Nation News
(၅၁)နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကိုလည်ပင်းညှစ်သတ်၍ ရွှေထည်များဖြုတ်ယူသွားသူ တရားခံကို ညတွင်းချင်းဖမ်းမိ
အသက်(၅၁)နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကိုလည်ပင်းညှစ် သတ်၍ ရွှေထည်ပစ္စည်းများဖြုတ်ယူသွားသူ တရားခံကို ညတွင်းချင်းဖမ်းဆီးရမိ
ရွှေပြည်သာ၊ စက်တင်ဘာ ၂၅
အိပ်ယာပေါ် ၌ အသက်(၅၁)နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား လည်ပင်းညှစ်သတ်၍သတ်၍ လက်ကောက်များနှင့်ဆွဲကြိုးတစ်ကုံးအားဖြုတ်ယူသွားသောလူသတ်တရားခံအားအချိန်တိုအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ရွှေပြည်သာမြို့မရဲစခန်းမှသိရသည်။
” တရားခံကိုညတွင်းချင်းပဲဖမ်းမိပါတယ်၊ သက်သေခံ ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်ရပါတယ် ၊တရားခံကသေသွားတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်ကိုအဝင်အထွက်ရှိတယ် လူမှုရေးကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်ကြရင်းနဲ့လူသတ်မှုဖြစ်သွားတာပါ” ရွေပြည်သာမြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးတင်မောင်လွင်ကပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဇီးကုန်းရွာဗဟိုရ်လမ်း သွယ် အမှတ်-၂၉၅နေ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မင်း(၄၇)နှစ်သည် စက်တင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းကနေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် အိမ်ခေါင်းရင်းဘက် အမှတ်-မ/၂၉၅(က)တွင်နေထိုင်သည့် အစ်မအရင်းဖြစ်သူ ဒေါ်……. (၅၁)နှစ်အား မတွေ့သဖြင့် ၄င်း၏ တူဖြစ်သူ မောင်..
….(၁၄)နှစ်အား ” နင့်အမေရော မတွေ့ဘူး၊ပြန်မလာ သေးဘူးလား ” ဟုမေးခဲ့ရာမေမေရှိတယ်၊ အိပ်နေတာပြောသဖြင့် တစ်နေကုန်အိပ်နေတာ ဟုတ်လို့လား၊ နှိုးလိုက်အုံး ဟုေပြာဆိုခဲ့ပြီး သမီးဖြစ်သူ မမြတ်ဆု(၁၈)နှစ်အားသွားရောက်ကြည့်ရှုစေခဲ့ရာ သမီးဖြစ်သူမှ ” မေမေရေ ဟုတ်တယ်၊ ကြီးကြီးက ခြင်ထောင်ထဲမှာရှိနေဟယ်၊ မျက်နှာမှာ အညိုအမဲတွေစွဲလို့ “ဟု အော်ပြောခဲ့သဖြင့် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မင်းလည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရာ ၎င်း၏အစ်မဖြစ်သူမှာအိပ်ယာခြင်ထောင်အတွင်း၌သွေးထွက်ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် အစ်မဖြစ်သူ အား သေဆုံးသည်အထိပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဖြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုဥပဒေအရ စုံစမ်းဖော်ထုတ်၍ အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းခဲ့သော အမှုဖြစ်ကြောင်းရဲမှတ်တမ်းများအရသိရသည်။
တရားလို၏တိုင်ကြားမှုကြောင့် ရွေပြည်သာမြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးတင်မောင်လွင်နှင့်နယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအခင်းဖြစ်နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာ ဒေါ်…….မှာဝဲဘက်မျက်လုံးနှင့်ပါးရိုးတွင် ညိုမဲဒဏ်ရာ၊ လည်ပင်းတွင်ပွန်းခြစ်ညိုမဲဒဏ်ရာများ၊ လျှာတစ်လစ်ထွက် ယာဘက်နားအောက်သွေးထွက်ဒဏ်ရာများဖြင့့် သေဆုံးနေကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရ၍ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာတရားခံမှာ ထိုအိမ်သို့အဝင်အထွက်ရှိပြီး သေဆုံးသူနှင့်လူမှုရေးကိစ္စ အရှုပ်အရှင်းရှိနေသူပန်းခြံစုရပ်ကွက် ကျောင်းလမ်း (၂၄)ရပ် ဇီးကုန်း ကွက်နေ သူ ထွန်းထွန်းဝင်း(၃၁) နှစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရသဖြင့်လိုက်လံဖမ်းဆီးရာစက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နံနက် ၃ နာရီ ကျော်အချိန်ခန့်တွင် ၎င်းငှားရမ်း‌နေထိုင်သည့်အိမ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးရမိ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်အရ၎င်းနှင့် သေဆုံးသူတို့မှာရင်းနှီးသူများဖြစ်ေကြာင်း စက်တင်ဘာ၂၃ရက် နံနက်(၁၀)နာရီခန့်က သေဆုံးသူ၏နေအိမ်ရောက်ရှိစဉ် ၎င်းအား သေဆုံးသူက လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရန်ပြောဆို သဖြင့် စကားများ၍ ၎င်းမှ သေဆုံးသူအား ဒေါသထွက်ကာလည်ပင်းညှစ်မိကြောင်း သေဆုံးသူဝတ်ဆင်ထားသော ရွှေဆွဲကြိုး(၁)ကုံး နှင့် ရွှေလက်ကောက်(၄)ကွင်းတို့အား ချွတ်ယူခဲ့ကာ ‌ဆွဲကြိုးအား ထန်းခြောက်ပင်ကွေ့အနီးရှိ နဝလီဆိုင်တစ်ခုတွင်ရောင်းခဲ့ပြီးလက်ကောက် (၄)ကွင်းမှာ ၎င်း၏ ဆိုင်ကယ်တူးဘောက် အတွင်း ထည့်ထားခဲ့ကြောင်းသိရသဖြင့် သက်သေခံပစ္စည်းများအားပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့ကြသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်အရ ရွှေပြည်သာမြို့မရဲစခန်းမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ထွန်းထွန်းဝင်းအား (ပ)
၃၄၀၉/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂/
တရုတ်ကာကွယ်ဆေး SinoVac ၂၀၂၁ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာရပါမယ်
ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ညွန့်ဝင်းဆွေနှင့်အဖွဲ့COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအား ကုသနိုင်ရေး ပြင်ဆင်နေမှုအား သွားရောက်ကြည့်ရှု